अनौठो परिवार : घरको ४ जना सदस्य तर चारै जना तेस्रोलिंगी, कसरी भयो यस्तो ? (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
अनौठो परिवार : घरको ४ जना सदस्य तर चारै जना तेस्रोलिंगी, कसरी भयो यस्तो ? (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौ । भनिन्थ्यो संसारमा मानिसका दुई जात र वर्ग हुन्छन् । एउटा महिला अर्को पुरुष । तर अहिले यो परिभाषा परिवर्तन भएको छ । महिला र पुरुष बाहेक संसारमा अर्को बर्ग पनि छ । जसलाई तेस्रोलिंगी भनिन्छ । हाम्रो समाजमा नाच्दै गाउँदै हिड्ने यो समुदायलाई राम्रो नमान्ने परम्परा थियो । कहिले काँही त प्रहरी पनि बोलाइदिन्थे, हामीलाई निकै नरमाइलो लाग्थ्यो, विगत सम्झदै यसरी भक्कानिन्छन् तेस्रो लिंगी ।
हामीले रमाइलो गर्दैै हिड्दा उनीहरुको के जान्थ्यो र ? प्रहरी किन बोलाउनु पर्यो ? उनी विगत सम्झदै भक्कानिइन् । क मानव , जसरि समाज मा जन्म हाम्रो हुन्छ त्यसरि नै तेस्रो लिङ्गिको हुन्छ ।तर समाज मा यिनीहरुलाई नराम्रो तरिकाले हेर्ने नजर जुन ब्यक्ति को छ तिनी हरुनै समाजका लागि क लं क हुन् । यि महान बुवा आमा हुन् जसले यो कुरालाई स्वीकार गर्यो ।
एउटा दुईटा होइन भएका ४ सन्तान नै अहिले तेस्रो लिंगी छन् । नवलपरासी वर्दघाटमा यस्तो परिवार छ । जया थापामगर अहिले टिकटकमा निकै भाइरल पनि छन् । उनको परिवारमा ४ जना तेस्रोलिंगी हुन् । टिकटकमा हेर्दा उनीहरु निकै खुसी र सुखी देखिन्छन् तर समाजले दिएको पी डा भने मनभरी छ । आफ्नो पी डा सुनाउँदा उनीहरु यसरी भक्कानिन्छन् ।